Iibso 3diiba 1 XNUMX Caanaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Soosaarida Bilaashka ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
3 ka mid ah 1 Korantada Caanaha Tooska ah
$ 85.99 qiimaha joogtada ah $ 99.99
maraakiibta From Poland Ukraine CN Saudi Arabia SPAIN Russian Federation France
fur Type EU UK AU US
Caddaan / Poland / EU Caddaan / Yukreeniyaan / EU Caddaan / CN / EU Caddaan / Sacuudi Carabiya / EU Cadaan / SPAIN / UK Caddaan / Xiriirka Ruushka / UK Caddaan / Yukreeniyaan / UK Caddaan / Faransiiska / Ingiriiska Caddaan / Sacuudi Carabiya / Boqortooyada Ingiriiska Cadaan / Poland / UK Caddaan / Xiriirka Ruushka / AU Caddaan / CN / UK Caddaan / Faransiiska / AU Caddaan / SPAIN / AU Caddaan / Poland / AU Caddaan / Yukreeniyaan / AU Caddaan / CN / AU Caddaan / Sacuudi Carabiya / AU Xiriirka cad / Ruushka / EU Caddaan / Faransiis / EU Caddaan / SPAIN / EU Caddaan / SPAIN / Mareykanka Caddaan / Xiriirka Ruushka / Mareykanka Caddaan / Yukreeniyaan / Mareykanka Caddaan / Faransiiska / Mareykanka Caddaan / Sacuudi Carabiya / Mareykanka Caddaan / Poland / US Caddaan / CN / Mareykanka
3 ka mid ah 1 Korantada Tooska ah ee Caanaha Kaydiya - Caddaan / CN / EU gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Moodalka: DM065w
Heerka Wareegga (RPM): 2800
Awood (W): <750W
Danab (V): 220-240V
Noocadda Awoodda: Korontada
Miisaanka Net: 900g
Awoodda xumbo: 130ml
Dhererka Fiilooyinka: 1m
Qiyaasta alaabta: 17 x 12 x 20 cm
Kulayl / Caano Qabow Soosaarida Caanaha Korantada ee Korantada ah waxay ku siineysaa 2 ikhtiyaar oo loogu talagalay xumeynta caanaha. Haddii aad jeceshahay caano xumbo kulul ama caano xiiran oo qabow, labadiinaba waad heli kartaan. DEVISIB xumbo caano otomaatig ah - adiga ayaa kuugu fiican.
Caanuhu way xumbayn karaan oo kululayn karaan ilaa 60 ± 5 ℃ (131 ℉ ~ 149 ℉) markay caanaha kululeynayaan, taas oo ah heerkulka ugu wanaagsan ee la cabi karo. Kuleylka badan wuxuu burburin doonaa nafaqooyinka caanaha.
Qaboojiye caanihan waxaa loogu talagalay inuu qooyo caanaha caanaha. Borotiinka iyo dufanka ku jira ayaa ah waxa u oggolaanaya caanahaaga inay xummadaan. Caanaha aan caanaha lahayn ayaa dhir ku saleysan nooca la soo saaray ayaa noqon doona mid aan si joogto ah u socon oo kala duwanaan kara Haddii aad ku adkeysato caanaha aan caanaha lahayn, waxaan kugula talin lahaa caanaha aan caanaha aheyn ee Barista kaasoo ay tahay inuu ka caawiyo caano xummada caanaha dhirta. Natiijada cadho lama ballan qaadi karo wixii caano dhir kale oo aan barista ahayn.
Qodobka ugu muhiimsan ee lagu gaarayo xumbo wanaagsan ayaa ah isticmaalka caano cusub oo qabow. Caanuhu waa inay ahaadaan kuwo qabow oo cusub. Isticmaal caano si toos ah looga soo qaaday qaboojiyaha isla markaana bilaw inaad si dhakhso leh u xoqdo. Caanaha ayaa ka qabow, wayna fiicnaanayaan. Waxaan soo jeedinaynaa in heerkulka caanuhu qiyaastii yahay 4 ~ 6 ℃ (39.2 ℉ ~ 42.8 ℉).
Ha uga tegin caano miiska saaran isticmaalka ka dib maxaa yeelay tani waxay saameyn ku yeelan kartaa caano-wanaagga. Had iyo jeer caanaha dib ugu celi qaboojiyaha markaad dhammeysid isticmaalka.
Waligaa ha ka buuxin caano ka badan heerka MAX. Hubso inaad isticmaasho shaashadda habboon. Hubi heerka tilmaamaha u dhigma. MAX Fill Line (130ml / 4.4Oz) kahor intaadan caano qubin. MAX Khadka Buuxi (300ml / 10.1Oz) kahor intaadan kululeyn caanaha.
Nadiifi weelka isla markiiba isticmaal kasta. Ku daadi oo nadiifi darbiyada adoo isticmaalaya biyo diirran oo saabuun leh, ka dibna ku qalaji maro jilicsan oo qalalan.
1 x Caano Frother
1 x Qaadista weelka
1 x Wareejinta qulqulka
Xumbo si fiican loo sameeyay
Gaarsiin degdeg ah (7 maalmood). Mahadsanid. Wax walba waxay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay. Ku talin.
Badeecad wanaagsan. Maraakiibta degdega ah Waxaan kula talin.
Horay ayey udhacday mar labaad oo aan casuumayo .. Waqti hooyo! Tayada wax soo saarka! Qurux badan! Maraakiibta degdegga ah Usbuuciiba way fiicneyd! Marka waad mahadsantahay
Diritaanka waa mid aad u dhakhso badan! Caanuhu waxay ahaayeen wax la yaab leh. Xaqiiqdii waxaan kugula talineynaa Delivery dukaanka inuu yahay mid dhakhso badan oo tayo fiican leh. Waxaan kugula talinayaa kabtanka runtii!